Gbasaa Pure PTFE nrapado Eriri Mezie - China Yangzhong chioma Star akara
Gbasaa Pure PTFE nrapado Eriri Mezie
Akpa Diaphragm dosing nfuli Akara
PTFE envelopu CNAF Lapjoint Flange gasket
Bushing Iburu taper mkpọchi
OEM graphite Jupụta PTFE Ring
Ọ dịghị-onu PTFE envelopu CNAF gasket
Description: 1.Expanded PTFE nkwonkwo sealant teepu bụ a multi-nzube gasket teepu arụpụtara si 100% gbasaa PTFE fluorocarbon ihe onwunwe. 2.It ọnọ dị ka a na-aga n'ihu ala njupụta teepu na a onwe-nrapado akwado warara. 3.It bụ nro na-adị ka nzà, kwe ka ọ dịrị ime mfe ka niile n'elu ụfọdụ na mpikota onu na a mkpa rịbọn nrụgide. Ngwa: Wusawanye PTFE nkwonkwo sealant teepu na-atụ aro ka a gasket teepu na ígwè, iko-agbakọta, ịkwanyere na faiba glaasi anwụrụ flanges, fume ...
1.Expanded PTFE nkwonkwo sealant teepu bụ a multi-nzube gasket teepu arụpụtara si 100% gbasaa PTFE fluorocarbon ihe onwunwe.
2.It ọnọ dị ka a na-aga n'ihu ala njupụta teepu na a onwe-nrapado akwado warara.
3.It bụ nro na-adị ka nzà, kwe ka ọ dịrị ime mfe ka niile n'elu ụfọdụ na mpikota onu na a mkpa rịbọn nrụgide.
Gbasaa PTFE nkwonkwo sealant teepu na-atụ aro ka a gasket teepu na ígwè, iko-agbakọta, ịkwanyere na faiba glaasi anwụrụ flanges, fume ducts, ihe lids, okpomọkụ exchangers, eriri iko mesikwuru plastic arịa, mgbapụta ụlọ flanges, uzuoku arịa flanges, manhole na manhole ekpuchi, seramiiki nkwonkwo, ventilashion ducts, haịdrọlik na pneumatic usoro, mmiri na usoro na tobaim ikpe.
Gbasaa PTFE nkwonkwo teepu a na-arụpụtara si 100% PTFE, ọ bụ ihe inert ihe onwunwe nke ike-eji na ọtụtụ ngwa megide corrosive gburugburu, ma e wezụga wụrụ awụ alkali ọla na elemental fluorine. 24b ga ghara imerụ media na ike ga-eji na ihe oriri na ọgwụ na ngwá ngwa.
Product Type: Wusawanye PTFE
Tụkwasịnụ Type: Joint Sealant Mezie
Ihe: 100% PTFE, nro na-magburu onwe ekwedo
Ọkpụrụkpụ: 1mm ~ 7.0mm
Obosara: 3mm ~ 25m
onye Onyenwe anyị nso: 0-14
Pressure Ịgba: 20Mpa (ma ọ bụ 2900 psi; ma ọ bụ 200kgf / cm2)
Njupụta: 0,7 ~ 0.8g. / Cm3 (43 ~ 49.5lbs. / Cu. Ft.3)
Matriks ike ọdụdọ: 30Mpa (4260 psi)
Creep Ntụrụndụ (ASTM F38): 51%
Sealablity (ASTM F 37A): 0,1 ml / Ọrụ Nchịkwa
Nyagide Eriri Akara ptfe Mezie
Yi ptfe akara Mezie
Ptfe Pipe akara Mezie
Ptfe akara Mezie
Ptfe Teflon faiba glaasi Mezie
Ptfe Eriri Akara Mezie
Akara Mezie ptfe
Silicone Eriri Akara ptfe Mezie
Teflon ptfe Mezie
Teflon Mezie ptfe Eriri Akara
Eri akara ptfe Mezie
OEM Yi Nitrile O-Ring
OEM PTFE ntekwasa Rubber Bottle Cap
PTFE OEM Set warara
Black graphite Jupụta PTFE